चिहानमा कदमको रूख- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
जसले छिचोल्छ, अनुसन्धाता बन्छ
खस जातिको इतिहास नेपाली समाजको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहेको खस र खसहरुको अरु समुदायसँगको ऐतिहासिक-सांस्कृतिक अन्तरघुलनबारे थाहा पाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधारग्रन्थ हो । प्रा. पोखरेलको आधारभन्दा बढी उमेर यही किताबको अनुसन्धानमा बितेको थियो ।
फाल्गुन १०, २०७६ भोगीराज चाम्लिङ
भाषाशास्त्री प्रा. बालकृष्ण पोखरेल (१९९० साउन ३०– २०७५ फागुन १२) को बहुचर्चित किताब हो– ‘खस जातिको इतिहास’ । उनका ‘पाँच सय वर्ष’, ‘नेपाली भाषा र साहित्य’, ‘राष्ट्रभाषा’, ‘एक मन सात चिन्तन’ लगायत सयभन्दा बढी पुस्तक प्रकाशित छन् । प्रा. पोखरेलको स्मृति–दिवसको सन्दर्भमा ‘खस जातिको इतिहास’ माथिको समीक्षा प्रस्तुत छ ।
प्रा. बालकृष्ण पोखरेलले एउटा लेखमा यस्तो आशय आउने गरी लेख्नुभएको रहेछ, ‘पश्चिम नेपालका दलितहरूमा पाइने मौखिक मान्दम–काव्य फेला पारेर एक जना अमेरिकी नागरिकले प्रकाशन गरेका छन् । लिम्बू मुन्थुम, राईको मुन्धुम र दलितहरूको मान्दम वा मान्धमको एउटै अर्थ हो मानसरोवर’ (सेवा नेपाल, डा. स्वामी प्रपन्नाचार्य श्रद्धाञ्जली अङ्क, साउन २०७३) ।
यो पढेपछि मलाई उग्र खुलदुली भयो । मैले विराटनगरमा रहनुभएको उहाँलाई फोन गरेँ । उहाँले अर्को नयाँ तर्क पनि गर्नुभयो, ‘जसरी भैंसी शब्द किरात राईहरूमा पुगेर भुइँसी बन्छ, त्यसरी नै मान्दम पनि मुन्दुम हुन पुगेको हो ।’ उहाँले किरात र मुन्दुमबारे लगातार आधा घण्टाजति आफ्नो कुरा बताउनुभयो तर अमेरिकी नागरिक र पुस्तकको नामचाहिँ सम्झन सक्नुभएन । बरु ‘त्यो किताब मैले मदनमणि दीक्षितबाट फोटोकपी गरेर पढेको हुँ, त्यहाँ सम्पर्क गर्नू’ भन्नुभयो । म डिल्लीबजारस्थित मदनमणि दीक्षितको निवासमा पनि पुगेँ । तर, उहाँले त्यसबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो । म हिस्रिक्क परेर फर्किएँ । र, फेरि बालकृष्ण पोखरेललाई फोन गरेँ, ‘सर, मदनमणि दीक्षितज्यूले त थाहा भएन पो भन्नुभयो ।’ प्रा. पोखरेलले हँस्यौली गर्दै भन्नुभो, ‘बाबु ! भैंसीलाई पनि दूध दुहुन फकाउन जान्नुपर्छ । फकाइ पुगेन ।’
पछि खोज्दै जाँदा थाहा पाएँ, उहाँले भन्नुभएको अमेरिकी नागरिक ग्रेगोरी जी. मस्कारिनेक रहेछन् । उनको एउटा लेख शीलू घिमिरेको अनुवादमा प्रज्ञा (२०४३, पूर्णांक ५५) मा ‘नेपाली झाँक्री र यिनीहरूको मन्तर’ शीर्षकमा प्रकाशित रहेछ । उहाँले भन्नुभएको किताबचाहिँ मस्कारिनेकको ‘रुलिङ्स अफ द नाइट’ रहेछ, जुन पश्चिम नेपालका कामी धामीहरूबारे गरिएको अनुसन्धान हो । मौखिक ज्ञानबारे मानवशास्त्रीय अध्ययनका हिसाबले नाम कहलिएकै पुस्तक मानिँदो रहेछ यो ।
भौतिक रूपमा बिदा भइसक्नुभएका प्रा. बालकृष्ण पोखरेलका केही अमूल्य कृति भने हामीमाझ सदा जीवित रहनेछन् । त्यसमध्ये एउटा हो– खस जातिको इतिहास (२०५५) । फिनिक्स बुक्सले पुनः (२०७६) प्रकाशन गरेको यो पुस्तक नेपाली समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटिरहेको खस र खसहरूको अरू समुदायसँगको ऐतिहासिक–सांस्कृतिक अन्तरघुलनबारे थाहा पाउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधारग्रन्थ हो । ८५ वर्षमा बित्नुभएको प्रा. पोखरेलको आधाभन्दा बढी उमेर खस जातिको इतिहास अनुसन्धानमा बितेको थियो । तब न जन्मियो यस्तो ग्रन्थतुल्य पुस्तक !
यो पुस्तकलाई अन्तिम रूप दिने बखतको कष्टकर कहानीबारे मैले पनि अप्रत्यक्ष रूपमा केही कुरा थाहा पाएको थिएँ । उहाँ त्यसबखत चर्चित रेडियो कार्यक्रम प्रस्तोता दाहाल यज्ञनिधिको ‘दाहालको दैलो’ नाम दिइएको अनामनगरस्थित निवासको माथिल्लो तलामा बस्नुहुन्थ्यो । त्यहीँ स–परिवार बस्नुहुन्थ्यो कवि बाल आवारा पनि । प्रा. पोखरेल दिनरात नभनी किताबलाई अन्तिम रूप दिन मरिहत्ते गरेर परिश्रम गर्दै हुनुहुन्थ्यो । र, उहाँको कोठा भूकम्पले हल्लाउँदा दराजका पुस्तकहरू खसेझैं छरपस्ट भएको हुन्थ्यो । त्यहीँ चिया खाएर खाली भएका गिलास असरल्ल हुन्थे । त्यहीँ कागजका टिपोटहरू मिल्किएका हुन्थे । यो विद्रूप अवस्था देख्न नसकेर बाल आवारालाई खसखस लाग्थ्यो र ‘गुरु म मिलाइदिन्छु’ भनेर पुस्तकहरू मिलाइदिनुहुन्थ्यो । फेरि भोलिपल्ट त अवस्था उस्तै ! यो क्रम केही दिन चलेपछि प्रा. पोखरेलले भन्नुभयो, ‘बाबु ! मेरो किताब मिलाइदिएर साध्यै छैन । एक दिन होइन, दुई दिन होइन । मलाई कुन बेला कुन किताब चाहिन्छ, खोज्दा सबै भताभुङ्ग भैहाल्छ । यसै छोडिदेऊ ।’
अनामनगरको असरल्ल कोठामा अन्तिम रूप दिइएको त्यो किताब साढे सात सय पृष्ठको भीमकाय शरीरमा प्रकाशित भयो (फिनिक्स बुक्सले यो पुस्तकको पहिलो संस्करण २०५६ भनेर उल्लेख गरेको छ तर २०५५ हो) । यो सजिलै छिचोलिने किताबचाहिँ होइन, हाडे ओखरजस्तो हो । कडा बोक्रालाई तह लगाएपछि गुदी भेटिएझैं मिहिनेत गर्नैपर्छ । सायद यही गाम्भीर्यका कारण सार्वजनिक छलफल र विमर्श कम भए पनि धेरैले पढेको अथवा पढ्न चाहेको किताब हो यो । यसबारे मलाई लागेका सार कुरा केही बुँदामा भन्ने जमर्को गरेको छु ।
एक, यो खस जातिबारे तिर्सना मेट्ने किताब होइन, बरु झन् बढी तिर्सना जगाउने किताब हो । कोही कसैले खस जातिबारे प्रस्ट हुनका लागि पढेर यो किताब छिचोल्यो भने ऊ अवश्य पनि अनुसन्धाता भएर निस्कनेछ । किनभने, प्रा. पोखरेलले खस जातिबारे जति अनुसन्धान गरेर यो पुस्तकमा प्रकाशन गर्नुभएको छ, त्योभन्दा धेरै संकेत छोडिदिनुभएको छ । नेपालभन्दा बाहिर धेरै परसम्म पुगेर, नेपालको इतिहासका हजार–पन्ध्र सय वर्षभन्दा धेरै परसम्म पुगेर लेखिएको यो किताबले खसहरूको जरा र फैलावटबारे अवश्य नै विस्तारमा चर्चा गरेको छ । त्यसरी नै पाठकलाई थुप्रै प्रश्न र नयाँ दृष्टिकोण पनि बोकेर बाहिरिने बनाउँछ ।
दुई, यो पुस्तकको सर्वथा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको मिथक अथवा धार्मिक व्याख्यानभित्र हराएको इतिहासको उद्धार हो । जस्तो कि एउटा उदाहरण मार्फत चर्चा गरौं । हिन्दु धर्ममा जुन स्वर्ग, नर्क अनि पाताल लोकको अवधारणा छ, त्यो अलौकिक नभएर ऐतिहासिक कुरा हो भनेर प्रा. पोखरेलले प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । पोखरेलका अनुसार, पाताल भनेको प्राण रक्षाका लागि अनुकूल स्थान भन्ने अर्थमा प्रयुक्त स्थानबोधक शब्द हो । पाताल–लोकलाई प्राचीनकालमा कानन, मणिपुर (फोनिसिया) र पौलस्त्य (फिलिस्ता) भनिन्थ्यो, अहिले लेबनान र प्यालेस्टाइन भनिन्छ । त्यस्तै मर्त्यलोक अहिलेको इराक हो (पृष्ठ १०१) । स्वर्गलोक भनेको प्राचीन सुरिया जातिको देश हो, जसलाई सिरिया भनिन्छ (पृष्ठ १३१) । ठीक यहाँनिर चाम्लिङ राई भाषामा प्रयोग हुने ‘सिरिया’ र ‘हि’ शब्दबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । चाम्लिङ भाषामा ‘सिरिया’ को अर्थ हुन्छ— ‘अचम्म, आश्चर्य’ ! त्यस्तै सिरियासँगै जोडिएको क्षुद्रेसिया (आनातोलिया) का हित्तीहरू (पृष्ठ १४४) सँग मिल्दोजुल्दो शब्द हो ‘हि’ । चाम्लिङ भाषामा रातो रगतलाई ‘हि’ भनिन्छ र हित्तीहरू पनि रातो वर्णकै थिए । रातो वर्णका हित्ती र रातो बुझाउने ‘हि’ शब्दका बीचमा कुनै साइनो छ कि संयोग मात्रै हो ? के सुर जाति र सुरदेश अर्थात् सिरियासँग अहिलेका किरातका पुर्खाहरू परिचित थिए ? यो अध्ययनको विषय हो । यसमा मुन्दुममा वर्णित ‘योँला’ चाहिँ सिन्धुघाँटी सभ्यताको कुरा हो भन्नेचाहिँ मेरो पनि तर्क छ ।
तीन, मलाई लागेको यो पुस्तकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विशुद्ध सांस्कृतिक अभ्यासमा परिणत भइसकेको इतिहासको उत्खनन गर्नु हो । यस्ता अनेकौं सन्दर्भ यो पुस्तकमा छन् । तर, यहाँ तिहार र काठमाडौं उपत्यकाको गठेमंगल चाडको मात्र कुरा गरौं । काठमाडौंमा हरेक वर्ष मनाइन्छ, गठेमंगल चाड । त्यो चाड खासमा घुँटीमुँगल हो अर्थात् मध्यकालमा काठमाडौं उपत्यकामा आक्रमण गर्ने मुसलमान राजा समसुद्दिन इलियासलाई बिदाइ गर्न गरिएको तयारीको सम्झनामा सुरु भएको हो । त्यस्तै तिहारमा खेलिने भैलोमा मागिने दान भनेको तिमूर–लङलाई दिन संकलन गरिएको चन्दाको सांस्कृतिक अवशेष हो (पृष्ठ ५७६) । त्यसैले लिखित सामग्रीमा मात्र भर परेर लेखिने इतिहासभन्दा माथि उठेर मौखिक ज्ञान, सांस्कृतिक अभ्यास, भाषा इत्यादि पनि इतिहास अध्ययन र लेखनका स्रोत हुन्, हुनुपर्छ भन्ने नयाँ जमर्को हो यो पुस्तक ।
चार, इतिहासका नसुल्झिएका कतिपय घटनालाई सुल्झाउने प्रयास गर्नुभएको छ, प्रा. पोखरेलले । आजसम्म पनि लिच्छविकालका चर्चित राजा अंशुवर्माका बारेमा इतिहासकारबीच मतैक्यता भइसकेको छैन । उनलाई अधिकांशले ठकुरी मानेका छन् । प्रा. पोखरेलले केही तथ्यका आधारमा अंशुवर्मालाई मगर ठकुरी मान्नुभएको छ (पृष्ठ ५४३) । मामाकी छोरीसँग बिहे गर्ने प्रचलन रहेका कारण ठकुरीहरू मगर थिए (पृष्ठ ४०१) । मल्ल, गोलेश, कल्यालझैं सीमित ठकुरीबाहेकको मूल लाङ्गाली (मगर) हो, त्यही वंशका हुन्, स्रङ–चङ–गम्पो पनि । उहाँको तर्क के हो भने नेपालका खस–मगरहरूले मानसरोवर पुगेर लिगवंश स्थापना गरे । त्यही लिगवंशका थिए— तिब्बतका राजा स्रङ–चङ–गम्पो (पृष्ठ ६०१) । अंशुवर्मा पनि त्यही लाङ्गाली वंशकै भएका कारण स्रङ–चङ–गम्पो र उनकी छोरी भृकुटीबीच विवाह भएको हुन सक्छ (पृष्ठ ६०२) । पोखरेलले अगाडि सारेको तर्क सही पनि हुन सक्छ, गलत पनि तर इतिहासका नसुल्झिएका कुरालाई सुल्झाउने नयाँ दृष्टिकोणचाहिँ यो पक्कै हो ।
तुलनात्मक भाषाशास्त्रका अध्येयता भएका कारण प्रा. बालकृष्ण पोखरेलले त्यो ज्ञानको पनि धेरै प्रयोग गरेका छन् यो पुस्तकमा । तर, विशुद्ध भाषाशास्त्रीय आँखाले मात्र सबै सन्दर्भमा सही निचोडमा पुग्न सकिँदैन कि भन्ने मेरो ठम्याइ छ । त्यसैले उहाँले नै प्रयोग गर्नुभएको शब्द सापटी लिएर केही खुरे टिप्पणी गर्न मन लागेको छ ।
एक, कतिपय कुरामा चाहिँ भाषामा मात्रै निर्भर हुन खोज्दा प्रा. बालकृष्ण पोखरेल चिप्लिनुभएको महसुस हुन्छ । उहाँ तामाङलाई थ्रेसबाट क्षुद्रेसिया हुँदै आर्मेनियाबाट नेपाल प्रवेश गरेको भनी व्याख्या गर्नुहुन्छ (पृष्ठ १५९) । त्यसको आधार बनाउनुभएको छ ‘तामाङ’ को ‘माङ’ (ईश्वर) शब्दलाई र त्यसलाई महाभारतको अम्बा र अम्बालिकासँग जोड्नुभएको छ । तर, सजिलो कुराचाहिँ के हो भने माङ भनेको तिब्बतमा विकास भएको प्राचीन बोन–धर्मसँग सम्बन्धित पितृ हो । नेपालमा माङ मान्ने समुदायभित्र किरातहरू पनि पर्छन् ।
दुई, प्रा. पोखरेलको अहिलेका किरात र खस (छाग) का पुर्खा दुई निकटत्तम शाखाका हुन् (पृष्ठ १४७) भन्ने तर्क छ । पोखरेलले किर (अथवा किन) शब्दको अर्थ घोडो हुने भएकोले छाग (खस) निकट हुन् भन्ने शब्दार्थको त्यान्द्रो समात्नुभएको छ । तर, संस्कृति, भाषा र मुख्यतः आनुवंशीयता (जेनेटिक्स) ले यो कुरा पुष्टि भएको छैन । बरु हालसम्मका अध्ययनले किरातहरूलाई चिनियाँ ह्वाङ हो नदी सभ्यताकै भनेर देखाइरहेको छ । यसमा पोखरेलले किरातीहरूले बोकाको मासु नखाने सांस्कृतिक सन्दर्भका आधारमा पनि किरात र खसका पुर्खा निकट हुन् भन्न खोज्नुभएको छ । तर, मुन्दुमी मिथकअनुसार किरातहरूले बोकाको मासु खान छोडेको भनेको सप्तकोसी क्षेत्रमा आइपुगेपछि मात्र हो, त्यसभन्दा पहिला उनीहरूले बोकाको मासु खान्थे ।
अर्को एक स्थानमा किरात समुदायभित्रका याक्खा र याक्थुम्बा (लिम्बू) पनि यक्ष (खस) हुन् (पृष्ठ १०) भन्ने तर्क गर्नुभएको छ, जबकि याक्खा र याक्थुम्बा शब्दबारे सम्बन्धित समुदायको व्याख्याचाहिँ प्रा. पोखरेलले भनेजस्तो यक्षसँग मिल्दो छैन ।
तीन, अर्को रोचक व्याख्या उहाँले सुनुवारबारे गर्नुभएको छ । उहाँ के तर्क गर्नुहुन्छ भने कुलुबाट कुनु (शुन वा शुनु) हुन बाध्य भएका आफ्ना बान्धवहरूको विजोग देखेर कत्युरी समुदायको एक शाखा बाहिङ राईहरूको शरणमा पुगेर सुनुवार भएको हो (पृष्ठ ५७१) । यस विपरीत किरातहरूमा प्रचलित मुन्दुमी मिथकमा चाहिँ लिम्बू, याक्खाबा, राई र सुनुवारका पुर्खाहरू वराहक्षेत्रबाट अलग भएका हुन् भनिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित समाजमा प्रचलित तथ्यहरू नसमातीकन गरिने शाब्दिक अर्थ लगाउँदा पोखरेल अन्यत्रै पुग्नुभएको देखिन्छ ।
चार, खसहरूको मौखिक ज्ञान अर्थात् कैरनको उपयोग भने प्रा. पोखरेलले यस पुस्तममा गर्नुभएको देखिँदैन । मेरो हिसाबमा खसहरूबारे अध्ययन गर्न सकिने जीवित सम्पदामध्ये यो पनि एक हो । मैले सुनेअनुसार, खसहरूले कैरनमा आफ्नो आदिम बसाइँसराइको कथा पनि भन्ने गर्छन् । इतिहासको कुरा गर्छन् । खस जातिबारे अनुसन्धान गर्नका लागि कैरन महत्त्वपूर्ण स्रोत हो ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७६ १३:३०